HARGEYSA, Somaliland - Waxaa maalinta berri ah lagu wadaa in la caleema-saaro Muuse Biixi Cabdi, Madaxweynaha 5aad ee Somaliland oo 13-kii bishii lasoo dhaafay ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday maamulkaasi.
Warsidaha Garowe Online ayaa ogaaday in wafuud heer wasiirro ah, oo ka kala socota Tanzania, Kenya, Ethiopia, Jabuuti iyo hay'ado caalami ah, gaar ahaan kuwa ka howlgala Soomaaliya ay ka qeybgalayaan caleema-saarka Biixi.
Macluumaadka GO uu helay ayaa sidoo kale sheegaya in Cabdiraxmaan Cirro Gudoomiyaha Xisbiga WADDANI, ahna Musharaxiintii la tartamay Muuse Biixi uusan kasoo qeybgali doonin munaasabadda.
Muuse Biixi ayaa ku guuleystay 51% codadkii ay dhiibteen shacabka Somaliland, gaar ahaan kuwii is-diiwaangeliyay oo gaarayay 700,000, isagoo ka adkaaday Musharaxiintii xisbiyadda WADANI iyo UCID.
Guushii Muuse Biixi waxay u horseeday xisbiga KULMIYE inuu shanta sano ee soo socota uu sii hogaamiyo Somaliland, waxaana lagu wadaa in Madaxweynaha cusub uu Gollahiisa wasiiradda ku dhawaaqo maalmo kadib caleema-saarkiisa.
Madaxweynaha cusub ee Somaliland ayaa waxaa horyaala arimo farabadan marka uu xilka la wareego kuwasoo dhinacyada siyaasada ee kala duwan ka sugayaan ee maamulkaas inuu qanciyo.
Qaar kamid ah gobollada waxaa ka taagan muran dhanka maamulka ah, iyadoo taasi ay sababtay in aan laga codeynin bariga Sanaag iyo qeybo katirsan gobolka Sool.
Waxaa kaloo jira heshiis Madaxweynaha xilka kasii dagaya ee Somaliland Maxamed Maxmuud Siilaanyo dhawaan ka galay hogaamiyaha Khaatumo Cali Khaliif Galayr, kaasi oo lagu sheegay inuu yahay awood qeybsi.
Cali Khaliif oo maalmo kahor warbaahinta gudaha wareysi siiyay ayaa sheegay in maamulka cusub ee Somaliland ay ka filayaan inuu furo dastuurka, si xukuumadda iyo Baaralaamka loogu daro xubno cusub.
Barlamanka Somaliland oo aan la soo dooran muddo 12 sano ah ayaa sidoo kale waxaa la sugayaa in sanadka 2019 doorasho u dareero iyadoo ay ku tartami doonaan xisbiga talada haya iyo kuwa mucaaradka ah.